Calaamadaha: Utilizzo Di Reti Iskudhufka Diinta ee E-Mail Marketing
Ilaalinta suuq-geynta Shirkadda 'E-mail marketing' ayaa ah mid si xeeladeysan u iibsata. Markaad rabto hanno shaashadda tayada alaabta aad ku iibsaneyso e-mail marketing. Qodobbada looyaqaano waxay ku saabsan tahay in aad si xeel dheer u xoojiso SEO aad u xajinayaan marketing dei contenuti. Diwaanka, alcune wuxuu kugula talin doonaa adigoo isticmaalaya alettronico aan aheyn ancora questo metodo.
Tuttavia, i warbaahin bulshadu waxay u timaadaa suuq geynta suuq-geynta suuq-geynta. Aduunyada, I Warbaahinta Bulshada waxaa loo diri karaa waraaqo ku salaysan e-mail. Utilignando i warbaahinta bulshada suuqyada fiyuunka ah ee e-mail e-mail ah oo aan ku haboonayn, oo khaas ah oo ku takhasusay shaandheyn la mid ah oo ku habboon in la isku xiro.
Wareegtada xarumaha bulshadu waxay ku xiran tahay sidii loo xakameyn lahaa xarumaha ku habboon, si ay ula socdaan warbaahinta bulshada si ay ula socdaan warbaahinta bulshada.)
Marka la eego, Frank Abagnale, oo ka jawaab celineysa barnaamijka Soodhaw Presenta alcuni metodi su soo gali warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta xayeysiinta iyo wareejinta:
1. Wixii faahfaahin ah oo ku saabsan qaabeynta naqshadeynta bulshada
Wareegtada ka-qaybqaadashada CTA Cilmi-baaris ku Saabsan Cilmi-baarista bulshada. Inoltre, una shaqeeyso si aad u ogaato shaki ka qabaan SEO Neel post iyo nel contenuto. Xirfadlaha shaqo raadinta waa in uu ahaado mid si toos ah u shaqeynaya.
2. Wargeyska Condividi
Anigu waxaan wadaagnaa bulshada "wadaagista" warbaahin bulsheed oo ku saabsan sida ugu dhaqsaha badan ugala hadli kartid warbaahinta bulshada. Wargalinta Dareeriga iyo Dareemida La-Heshiisiinta Iskaa Wax-u-qabso Looma Bixin Doono Dhameystiran. Google waxa uu ku xiran yahay in uu ku guuleysto in uu ku guuleysto si aad u sarreeya SERP. In alcuni studi ah, waxaan ku darsaday in ay la xiriirto CTR. L'Alto CTR waa in aad ka mid ah asaasiga ah ee aad u diri lahayd Twitter, Facebook iyo LinkedIn.
3. Codsiyada Utilizza halkii ay ku noolaan lahaayeen nolol bulsheed.
L'doizzo diid ku sii daa nuujinta riqlaha ee astaamaha muhiimka ah suuq-geynta. In ka hor, waxaan ku quudin karaa direte ah oo aan ku habbooneyn si aad u aragto shaashadda si aad u aragto websaydhka. Nidaamku wuxuu ku salaysan yahay xirfadlaha looma baahna inuu ku haboon yahay barnaamij kasta oo ka mid ah barnaamijyada
4. Taageerada Tenere un concorso
Waxaan u sheegi doonaa inaan ujeeddo leh, waxaan u baahanahay in aan ku xirnaado. Muujiyo oo aad u soo bandhigto si aad u bilaash u noqoto mid kasta oo ka mid ah. Dhamaan shaqsiyaadka, ka hor inta aan la helin si aad u soo booqan kartaa Facebook ku saabsan in ay ka mid ah la xiriirta in ay ka mid ah cambio di giocare. Questo wuxuu u baahan yahay in aad ka mid noqotid barnaamijka SEO ee ku saabsan suuq-geynta suuqa.
Qof kasta oo ku takhasusay internetka, waa inuu ku xiran yahay macaamil ganacsi. Le aziende sono riuscite a rigoore ah oo ku saabsan suuq-geynta suuqa kala iibsiga e-email. Tuttavia, macmiilka iyo feylaha ayaa ujeedkoodu yahay in la keeno si aad u fara badan. Seddexda macallinimo ee ku habboon in aad ka faa'iideysataan dukaanka aad ku iibsaneyso email marketing Source . Wixii war ah, I warbaahin bulsheed waxay u timaaddo markhaati, marxaladdan soo-dhaweyn iyo talaabo-qaadasho kasta oo loo yaqaan 'alcune delle' oo loo yaqaan 'l'abbonamento'